बिकीनीको आ’लोचना भएपछि पहेँलो सारीमा देखिइन् प्रियंका ! – Taja Khawar
बिकीनीको आ’लोचना भएपछि पहेँलो सारीमा देखिइन् प्रियंका !
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८ समय: १६:२१:४९
अभिनेत्री प्रियंका कार्की अहिलेकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन रुचाउने उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै नै सक्रिय छिन् ।नेपाली चलचित्र जगतकी प्र’ख्यात नायिका प्रियंका कार्की अहिले गर्भवती रहेकी छिन्।
उनको चर्चा उनले काम गरेका चलाचित्रको कारण मात्र न’भएर विभिन्न कारणले हुने गर्छ।उनी गर्भवती भएदेखि नै लाइमलाइटमा छिन् । उनी आमा बन्ने अन्तिम समय न’जिक आइसकेको छ । अभिनेत्री प्रियंका केही समय अघि ‘बेबी सावर’ नै गरिन् ।
उनको चर्चा उनले काम गरेका चलाचित्रको का’रण मात्र नभएर विभिन्न कारणले हुने गर्छ। उनी गर्भवती भएदेखि नै लाइमलाइटमा छिन् । उनी आमा बन्ने अन्तिम स’मय नजिक आइसकेको छ । अभिनेत्री प्रियंका केही समय अघि ‘बेबी सावर’ नै गरिन् ।
आमा बन्ने मिति नजिकिदैँ गएपछि उनको घर’मा नयाँ परिवारको सदस्यको स्वागतमा दही चिउरा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । सधै ग्लामर्स लुक्समा देखिएर गालि खाने प्रियंका आज भने पहेँलो साडीमा देखिएकी छिन् ।
Last Updated on: August 8th, 2021 at 4:21 pm